Legal Information/Visa | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Legal Information/Visa	16
Gaddafi is now running likearat ( Rodent/ Vermin)
Comments By Postbin bo..........(ဘင်ဘို) - အလင်း ဆက် - မောင် ပေမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - မောင် ပေ - TheWinner Getprizeစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - Mobile13 - Ko chogyiရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - မောင် ပေ - Mobile13မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အလင်း ဆက် - အရီးခင်လတ်``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - TheWinner Getprize - ခရီးသည်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - မောင် ပေ - Miss Crystallineကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - Foreign Residentကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - မောင် ပေ - ခရီးသည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - ခရီးသည်ကြီး - natureဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) - Mobile13နယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - ခရီးသည်ကြီး - TNAငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - Ko chogyiလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ko chogyi - Ma Maကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - ကိုရင်စည်သူအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - uncle gyiမပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကလေး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - rain pricessကား ဒုက္ခ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဦးကြောင်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - TNAဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13တွံတေးအလှူ.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - kyaw hteikဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - phoe choယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities